Urethritis महिलाहरु मा (urination समयमा टीस)
Urethritis (को urethra को सुनिंनु) - लगभग हरेक दोस्रो महिला असर गर्ने एक रोग। यो entail सक्छ यो रोग र के जटिलताहरू लागि, हामी यस लेखमा वर्णन।
रोग को पहिलो संकेत जल र दिन र दोस्रो unabated लागि विद्यमान जो urethra, मा urination समयमा टीस, दुखाइ छन्। धेरै मानिसहरू अक्सर urethritis cystitis संग भ्रमित छन्। Cystitis (थैली सुनिंनु) विपरीत नैदानिक तस्वीर को एक बिट छ: तल्लो दुखाइ aching , भुँडी मा काटन को urethra, ज्यादातर नराम्ररी समाप्त जो बाथरूम, गर्न बारम्बार चाहनाको।
urethritis विशेषता सुविधाको लागि, वी डी वा प्रारम्भिक जबकि cystitis बलियो दुखाइ छुट्टी को अन्त मा हुन्छ टीस छ। कहिलेकाहीं यी दुई रोगहरु हातमा हात जाने र तिनीहरूको लक्षण एकदम स्पष्ट देखेका छन्।
Urethritis महिला बिल्कुल कुनै पनि उमेर समूह असर गर्छ। स्वाभाविक, त्यसैले आफ्नो जीवन मा हरेक महिला थप एक पटक यो समस्या भेट हुन सक्छ भन्दा urethra, तिनीहरूलाई धेरै मा सुनिंनु को likelihood प्रकुपित कि कारक, छन्। तर मात्र होइन कमजोर यो रोग गर्न susceptible सेक्स मानवता को बलियो आधा पनि, urethritis देखिन सक्छ छन्।
मानिसहरू मा urination समयमा टीस छैन यस्तो gonorrhea, trichomoniasis, आदि रूपमा संक्रामक रोगहरु, केवल urethra पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि मा व्यक्त लक्षण एक उरोलोजस्त हेर्न र उपयुक्त परीक्षण पारित गर्न आवश्यक छ।
के कारण महिला सेक्स मा urethritis हुन सक्छ?
सबै को पहिलो, यो आवधिक hypothermia, जो पछि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस्तै प्रभाव कहिलेकाहीं यौन साझेदार बारम्बार परिवर्तन गराउँछ। केही महिला लक्षण तुरुन्तै सहवास पछि वा समयमा exacerbated छन् याद।
अर्को कारण - गरिब पोषण, नूनिलो, मसालेदार, मसालेदार को दुरुपयोग, मिठाई - यी भोजन को सबै अक्सर urethra मा दाह र पीडा कारण।
स्वास्थ्य समस्याहरू मुख्य कारण gynecological रोगहरु छन्। महिला लैंगिक अंगहरु कुनै पनि सुनिंनु adversely जसबाट हाम्रो प्रतिरक्षा lowers, योनी को microflora असर गर्न सक्छ, र यो पृष्ठभूमि मा urethra गर्न सजिलै हस्तान्तरण छन् संक्रामक रोगहरु छन्।
Urolithiasis। जो च्यानल मा आ गर्दै मृगौला पत्थर, मा शिक्षा urethritis कारण हुनेछ भनी चोट र urination र पीडा बेला संक्रमण टीस हुनेछ सामेल गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै माथि अंक अक्सर प्रतिरक्षा urethra मा एक कमी सम्बन्धित छन्। एउटै नतिजा द्वारा अक्सर प्रसब, गर्भावस्था, menstrual चक्र र स्तन-रुचाउने परिणाम। यी सबै परिवर्तनहरू सीधा हर्मोन पृष्ठभूमिमा उतार चढाव सम्बन्धित छन्।
पहिलो चरणको urethritis आवधिक manifestations, अर्थात् विकास सुरु लक्षण पूर्ण गायब रोग को लक्षण worsen गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, एक महिला अक्सर आफ्नो शरीर मा कुनै पनि परिवर्तन देख्नु छैन र मा डाक्टर भ्रमण postpones "फिर्ता बर्नर।"
दोस्रो चरण exacerbations एक तेज गति द्वारा विशेषता छ। पनि बलियो एन्टिबायोटिक को स्वागत गर्न मद्दत गर्दैन। मात्र कुरा क्लिनिक eases कि - गंभीर exacerbations समयमा, मिठाई नूनिलो, मसालेदार र अलग्गै यौन सम्पर्क को प्रतिबन्ध।
तेस्रो चरण मुश्किल छ। महिला, लगातार दुखाइ जल र urination समयमा टीस असह्य हुन्छ। Exacerbations अलिकति मात्र supine स्थिति कम। एन्टिबायोटिक सकारात्मक परिणाम दिन छैन, तर केवल अप्रिय घटना वृद्धि।
तपाईं रोग व्यवहार छैन भने, त्यसपछि यसलाई विभिन्न जटिलताहरू नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, र संरचना परिवर्तन गर्ने urethra को (को साँघुरो भएको urethra)। सुनिंनु रोक्न, तपाईं ध्यान दिएर, स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ सालाना भ्रमण गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं फेला आफैलाई रोग चलाउन छैन ताकि प्रारम्भिक, उपचार सुरु सर्वश्रेष्ठ urethritis। पनि चिकित्सकहरु विभिन्न रोगहरु को रोकथाम उपचार भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर आश्वस्त।
महिला मा Trichomoniasis: उपचार, निदान, लक्षण, गर्भावस्था
छोराछोरीको pharyngitis कस्तो व्यवहार गर्न
इभ्यानोभो क्षेत्रीय अस्पताल: ठेगाना, फोन रजिस्ट्री, डाक्टर लेख्न
नाक घटेको कसरी ड्रिप गर्न? डाक्टर र रोगी प्रशंसापत्र को सल्लाह
अनाज वाहिकाओं को आरईजी। निदान विधिको फाइदा
मानिसहरू मा खमीर संक्रमण लक्षण
आँधी चेतावनी: अवस्था र विशेषताहरु
3 जी संग सस्ता ट्याब्लेट: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
चालु 100 मीटर: पुरुष र महिला लागि आदर्श
पहाड स्की सबै समावेशी
क्रस: सपना व्याख्या। व्याख्या सपना
मानव शरीर को मांसपेशिहरु stretching गर्दा के गर्न?
आफ्नो हातमा एक सोफा कसरी जीत। एक कुनामा सोफा कसरी जीत
नाम इब्राहिम को अर्थ। सुविधा नाम, भाग्य, रहस्य
Mnevnikovskaya जहाँ floodplain? ग्राहक समीक्षा
के तापमान मा जन्मेका बच्चा नुहाउने गर्न। सुझाव र चाल
सपना व्याख्या: कागज पैसा हेर्न सपना - के को लागि?
ग्रनडिग ( "Gryundik") - टिभी: प्रयोगकर्ता पुस्तिका, वर्णन, समीक्षा